Ngathi | I-YingYee oomatshini kunye neNkonzo yeTekhnoloji kwiCandelo, Ltd.
I-YingYee Oomatshini kunye neNkonzo yeTekhnoloji yeNkcubeko, i-Ltd inegunya elikhethekileyo kwinkqubo yentsimbi. Sijolise kurhwebo lwamanye amazwe kwaye sithobele imigaqo yeshishini kunye nemigaqo engqongqo. Iqela lethu lomelele kuyilo, uphando, ukuthengisa kunye nenkonzo kwizixhobo zenkqubo yesinyithi. Isidima sethu kunye nokuthembeka kuqinile, enkosi kulungiso lwabathengi kunye nokubuyela kwabo kushishino oluninzi.
Luxanduva lwethu ukukhonza abathengi bethu kakuhle kunye nokhuseleko iimfuno zabo zeshishini. Sijonge ukudala imeko yokuphumelela kubo bonke abathengi bethu kwaye sizame konke okusemandleni ethu ukunqanda nokususa nayiphi na imiba enokubakho. Igalelo elivela kubathengi bethu liya kuphathwa ngexesha elifanelekileyo kulwaneliseko lwabo. Ukuqina kwethu okuqinisekileyo kunye nabathengi abonelisekileyo ngumboniso weenkonzo zethu ezigqwesileyo. Ungabala iinkonzo zethu ezigqwesileyo eziqhubekayo kunye neenkxaso.
I-YingYee ibonelele ngoomatshini benkqubo yesinyithi kumazwe angaphezu kwama-30, ikakhulu e-US nase Mzantsi Melika. Oomatshini bethu kunye neenkonzo zethu ziyakonwabela ukubuyela umva kubathengi abonelisekileyo ababuyela kuthi kwintsebenzo yexesha elide. Ngapha koko, inqanaba lentlawulelo lingaphezulu kwe-80%.
Bonke oomatshini abavela kwi-YingYee bagutyungelwe iwaranti yonyaka ukusukela ekuthumeni, kunye nokugcinwa okuzinzileyo kunye nenkxaso yokulungisa.